Ulwazi aluthekele kunina lumsize wasungula inkampani yezinto zokuhloba zesiNtu. Uxoxe noTEBOGO MOKWENA - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
UMnu uRonald Dikgari, umsunguli weDironraps, inkampani yemigexo yesiNtu ayisungule ngo-2017, uthi ulwazi lwezobuchwepheshe nezobuciko akufunde entombini emzalayo yikona okwenze wachuma kulo mkhakha.
“Umama wuyena owangifundisa konke akwaziyo ngomkhakha wokuthunga, ikakhulukazi njengoba vele naye wayeqale ukuzibandakanya kulo mkhakha kusukela esemncane, nami intshisekelo yako yakhula kusukela lapho-ke,” kulanda le nsizwa esijikeleze umhlaba ngomsebenzi wayo.
UDikgari uthi inkampani yakhe, ezinze ePolokwane, eLimpopo, umkhiqizo awenzayo kuyona ugxile emasikweni yaseNingizimu Afrika. Kule nkampani wenza izikhwama, othayi, amabhengela namacici enziwe ngobuhlalu okutholakala esitolo sakhe esisePolokwane nesiseThohoyandou, kulesi sifundazwe.
Umkhiqizo weDironraps okhangisa izwe
Uthi ukuhambela amanye amazwe kumsize kakhulu wathola amakhasimende. Phakathi kweminye yemicimbi aseke wayihambela yiMiami International Convention Centre ngo-2019 ne-NY NOW International Exhibition eNew York, eMelika.
“Ngiphinde ngahambela eminye imibukiso yasezweni nasemazweni angaphandle, okuyilapho ngihlangane khona nabantu abaningi. Esinye sezikhwama engazenza sasetshenziwa yi-SABC emdlalweni wayo obizwa ngeSkeem Saam, lapho okwakushada khona abalingisi balo mdlalo uMarothi noRachel.
“Ngisebenzise lawo mava ami ukunxenxa amakhasimende akuleli zwe ngoba ngathola ukuthi abantu baphesheya kwezilwandle bawuthanda kakhulu umkhiqizo wami ukwedlula abakuleli zwe, okuyikona okwenza kube lukhuni satshe ukuchuma kuleli zwe,” kuchaza yena.
Omunye wemikhiqizo yeDironraps
Uthi iLimpopo Jewellery Business Incubator yisona sikhungo esimsize kakhulu wathola ulwazi oluningi oluthinta lo mkhakha.
Uthi ufunde kulesi sikhungo ngokwenziwa kobucwebe nokunye okufuze lokho.
“Ngisho abantu abadala engahlangana nabo emibukisweni yezobuciko bayaziqhenya kakhulu ngami futhi bakushayela ihlombe kakhulu ukungena kwami kulo mkhakha.
“Njalo uma ngenza umsebenzi othile, ngivele ngikhumbule isikhathi lapho ngihambela khona amanye amazwe, okuyilapho engakhombisa khona umsebenzi wami, nokwangijabulisa kakhulu ukunconywa ngako,” kusho uDikgari.
Ukholwa wukuthi kubalulekile ukukhula nokuthuthukisa umsebenzi awenzayo, okufakazelwa wukwengeza kwakhe izindandatho, amabhengela nobunye ubucwebe obenziwe ngegolide, isiliva nethusi.
Imikhiqizo yakhe iyatholakala ngobuchwepheshe besimanje nakwi-website yakhe.
Facebook: Dironraps Beading Fashion & Accessories